Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tale jeneralin'ny Ethiopian Airlines, Tewolde Gebre Mariam, fanambarana avy amin'ny toerana fianjerana ET 302
Tewolde GebreMariam no Tale jeneralin'ny vondrona, Ethiopian Airlines. Malahelo mafy ny tale jeneralin'ny vondrona Ethiopian Airlines Group ny lozam-pifamoivoizana nahafaty olona tamin'ny ET 302/10 martsa tamin'ny sidina iray avy any Addis Ababa mankany Nairobi.
Ny tale jeneralin'ny vondrona izay eo amin'ny toerana nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana izao dia manenina amin'ny fanamafisana fa tsy misy olona tafavoaka.
Naneho ny fiaraha-miory sy fiaraha-miory amin'ny fianakaviana sy olon-tiany mpandeha sy ekipa namoy ny ainy tamin'ity loza mahatsiravina ity izy.
Hamoaka fampahalalana fanampiny ny Ethiopian Airlines raha vantany vao misy izany. Ao amin'ny tranokala Ethiopian Airlines ihany koa ny fampahalalana nohavaozina ao amin'ny www.leti-irlirlines.com
Ny tranokala Ethiopian Airlines kosa dia toa mahavita azy amin'izao fotoana izao.
Andriamatoa Tewolde GebreMariam dia titan'ny indostrian'ny fiaramanidina. Amin'ny maha-CEO an'ny vondrona Ethiopian Airlines azy dia izy no mitarika ny seranam-piaramanidina mitombo haingana sy mahomby indrindra atsy Afrika. Nanomboka ny asany tao amin'ny Departemantan'ny fitantanana fifamoivoizana an-tsokosoko tao amin'ny orinasa izy rehefa niditra telo-polo taona lasa izay ary nitombo ny laharana tamin'ny alàlan'ny fitantanana any ivelany, Marketing ary Sales amin'ny Chief Operating Officer talohan'ny nanendrena azy ho CEO.
Andriamatoa Tewolde dia ao amin'ny biraom-panjakan'ny orinasam-panjakana lehibe etiopianina, izy no mitarika ny fandraisana andraikitry ny fiaramanidina Pan-Afrika ary mipetraka, miaraka amin'ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana momba ny vondrona mpanolotsaina avo lenta momba ny fitaterana maharitra. Nahazo loka 20 ny kaompaniam-pitanterany tamin'ny taona 2015 ary ekena ho iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana azo antoka indrindra eto an-tany. Ny fahatsapany andraikitra amin'ny orinasa amin'ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana dia tsy mety diso. Ao anatin'ny Fandaharan'asan'ny CSR an'ny ET, miasa miaraka amin'i Greener Ethiopia ny zotram-piaramanidina mba hametrahana indray ny firenena amin'ny hazo.
Miaraka amin'ireo valisoa azon'ny Etiopiana, Andriamatoa Tewolde tenany dia nahazo ny Tale Jeneraly afrikanina tamin'ny taona, Mpitantana orinasa afrikanina tsara indrindra, ny loka ho an'ny tetikady isam-paritra ho an'ny Regional Leadership ny loka iraisam-pirenena ho an'ny Grand Prix iraisam-pirenena 2015 any Milan ary ny loka ho an'ny CEO indrindra indrindra momba ny lahy sy vavy 2015 avy amin'ny Vondron'ireo vehivavy mitarika ao Afrika.
Nahazo ny mari-pahaizana BA momba ny toekarena avy amin'ny Oniversite Addis Ababa any Ethiopia izy ary ny mari-pahaizana Master in Business Administration avy amin'ny Open University any United Kingdom.